बढ्यो दक्षिण कोरियन बाहेक सबै देशको मूल्य , हेर्नुहोस् कुन देशको बिनिमय दर कति ? – Mix Khabar
बढ्यो दक्षिण कोरियन बाहेक सबै देशको मूल्य , हेर्नुहोस् कुन देशको बिनिमय दर कति ?
काठमाडौँ । आज बुधबार नेपाली बजारमा दक्षिण कोरियन बाहेक सबै देशको मूल्य बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र्र बैकँले तोकेको बिनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १२ रुपैयाँ ४० पेसा रहेको छ र भने बिक्रिदर १ सय १३ रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी आज दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै आज साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ। युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ । त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६९ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ७१ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ९५ पैसा छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। त्यस्तै आज बहराईन दिनार एकको खरिददर २ सय ९८ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ९९ रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको छ।कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ७२ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ।त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४५ रुपैयाँ ५५ पैसा, बिक्रिदर १ सय ४६ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ।
Posted on: Wednesday, May 15, 2019 Time: 8:32:21